Ramón M.ª del Valle-Inclan. Ememe ncheta ọmụmụ ya. Iberibe | Akwụkwọ dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akụkọ ihe mere eme, ọtụtụ
Ramon Maria del Valle Inclan A mụrụ ya n'ụbọchị dịka taa na 1866 na Villanueva de Arosa. Ọ bụ akụkụ nke Ọgbọ nke 98 na nnukwu ọrụ ya (ọ zụlitere ihe nkiri, uri, akụkọ na akwụkwọ akụkọ) ka etinyere n'ime ọgbara ọhụrụ. Mepụtara ma kwalite oku a grotesquena Ihe ọkụkụ Bohemia dị ka ndị kasị nnọchiteanya na ama aha. Ọ bịanyekwara aka n'akwụkwọ aha dịka Okwu Chineke, ọkọlọtọ ọchịchị aka ike o Tuesday nke Carnival. Nke a bụ nhọrọ iberibe icheta.
1 Ramón María del Valle Inclán - Iberibe
1.1 Ogige ndò
1.2 Mgbụsị akwụkwọ Sonata
1.3 Ihe ọkụkụ Bohemia
1.4 Onye njem ahụ
Ramón María del Valle Inclán - Iberibe
Naanị m mere onyinyo na-ekpe ekpere n'okpuru oriọna dị na presbytery: ọ bụ nne m na-ejide akwụkwọ mepere emepe n'aka ya ma na-agụ isi ya. Site n'oge ruo n'oge, ifufe na-efegharị ákwà mgbochi nke windo dị elu. M wee hụ na mbara igwe, ugbua ọchịchịrị, ihu nke ọnwa, icha mmirimmiri na elu dị ka chi nwanyị nke nwere ebe ịchụàjà ya n'ime ọhịa na ọdọ mmiri ... M na-atụ egwu dị ka m na-enwetụbeghị, ma achọghị m. nne m na ụmụnne m ndị nwanyị chere na m bụ onye ụjọ, m wee guzo n'enweghị ihe ọ bụla n'etiti ụlọ ọrụ ahụ, anya m lekwasịrị anya n'ọnụ ụzọ nke mepere emepe. Ìhè oriọna gbapụrụ. N'elu ákwà mgbochi windo na-efegharị, ígwé ojii na-agafekwa ọnwa, kpakpando na-agbanye ma gbanyụọ dị ka ndụ anyị.
Mgbụsị akwụkwọ Sonata
M rutere n'ọnụ ụlọ ihi ụra ya, nke meghere. N'ebe ahụ, ọchịchịrị ahụ dị omimi, na-esi ísì ụtọ na nke na-ekpo ọkụ, dị ka a ga-asị na ọ na-ezochi ihe nzuzo nke ụbọchị anyị. Lee ihe nzuzo jọgburu onwe ya ọ na-aghaghị idebe mgbe ahụ! N'iji nlezianya na ezi uche, ahapụrụ m ozu Concha ka ọ dina n'àkwà ya, m wee pụọ na-enweghị mkpọtụ, n'ọnụ ụzọ m enweghị isi ma na-asụ ude. Enwere m obi abụọ ma m ga-agaghachi tinye nsusu ọnụ ikpeazụ n'egbugbere ọnụ ndị oyi kpọnwụrụ akpọnwụ: Aguzogidere m ọnwụnwa ahụ. Ọ dị ka ihe omimi nke onye omimi. Atụrụ m egwu na e nwere ihe dị nsọ n'ime obi mgbawa ahụ nke rikpuru m. Ihe na-esi ísì ụtọ nke ime ụlọ ya na-enwu n'ime m, dị ka ịta ahụhụ, ncheta nke mmetụta uche.
Ihe ọkụkụ Bohemia
Ihe ngosi nke iri na abụọ
Max: Don Latino de Hispalis, agwa mara mma, m ga-eme ka ị nwụọ na akwụkwọ akụkọ!
Don Latino: Ọdachi, Max.
Max: Ọdachi anyị abụghị ọdachi.
Don Latino: Ọ dị mma, ihe ga-abụ!
Don Latino: Agbagọkwala ọnụ gị, Max.
Max: A na m ajụ oyi!
Don Latino: Bilie. Ka anyị gagharịa.
Max: Enweghị m ike.
Don Latino: Kwụsị charade ahụ. Ka anyị gagharịa.
Max: Nye m ume gị. Ebee ka ị gara, Latino?
Don Latino: Anọ m n'akụkụ gị.
Max: Ebe ọ bụ na ị ghọrọ ehi, enweghị m ike ịmata gị. Nyem ume gị, ọmarịcha ehi nke anụ ụlọ belenita. Mgbo, Latino! Ị bụ onye nche, ma ọ bụrụ na ị moo, Apis Ox ga-abịa. Anyị ga-alụso ya ọgụ.
Don Latino: Ị na-atụ m ụjọ. I kwesịrị ịkwụsị njakịrị ahụ.
Max: Ultraists bụ phonies. Ọ bụ Goya chepụtara ihe grotesque ahụ. Ndị dike a ma ama agaala maka ijegharị na Alley nke Cat.
Don Latino: Ị dị nnọọ nro!
Max: Ndị dike kpochapụwo gosipụtara na enyo concave na-enye Esperpento. Ihe dị egwu ndụ Spanish pụtara nwere ike ime naanị site na ịchọ mma agbagọ n'usoro.
Don Latino: Meow! Ị na-ejide ya!
Max: Spain bụ nrụrụ dị egwu nke mmepeanya Europe.
Don Latino: Enwere ike! M na-egbochi onwe m.
Max: Onyonyo kacha mma na enyo concave bụ ihe nzuzu.
Don Latino: Ekwenyere. Mana ọ na-atọ m ụtọ ile onwe m anya na enyo dị na Calle del Gato.
Max: Mụ onwe m. Nrụrụ ahụ na-akwụsị ịbụ mgbe ọ nọ n'okpuru mgbakọ na mwepụ zuru oke. Ihe ịchọ mma m ugbu a bụ iji mgbakọ na mwepụ mirror concave gbanwee ụkpụrụ oge gboo.
Onye njem ahụ
Ndụ m agbajiwo! Na ọgụ
N'ime ọtụtụ afọ, ume m na-enye ohere,
Ndi-npako nēche kwa ala
echiche nke ọnwụ, nke na-ewute ya.
Ọ ga-amasị m ịbanye n'ime m, soro m biri,
nwee ike ime obe n'egedege ihu m,
na-amaghị enyi ma ọ bụ onye iro,
kewapụnụ, na-ebi ndụ nsọpụrụ.
Ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ odida nke ịdị elu
ya na ìgwè ewu na aturu na ndi-ọbù-abù ndi-ọzùzù-aturu?
Ebe ị ga-enweta ọhụụ dị ọcha
Kedu ihe na-eme mkpụrụ obi na okooko osisi ụmụnne nwanyị?
Ebe a ga-egwu ili n'udo
were kwa ihe-nb͕um me achicha nke miri-ozuzo?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Ramón M.ª del Valle-Inclan. Ememe ncheta ọmụmụ ya. Iberibe